SIDA LOO CUNO, SIDA LOO KARSADO IYO WAXA LA ISTICMAALO EE XAYAWAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
3 raashin iyo faa'iidooyin ka mid ah jadwalka
Qaar ka mid ah labaatankii ama soddon sano ka hor, iyagu xitaa ma aysan maqlin saxan asal ah oo ah caanaha la cuni karo ee wadamada Slavic, ma aha in ay isku dayaan ama ku kariyaan jikadooda. Laakiin kala duwanaanshaha quruxda badan ee dhaqanka qaran ee waqtigeena ayaa noqonaya mid si cad loo heli karo. Qofku wuxuu isku dayaa inuu jimicsiga Paris ku qaato makhaayad inta lagu jiro safar dalxiis, qof ayaa raadinaya wixii la mid ah ee macmacaanka dalkiisa, qofna wuxuu go'aansadaa inuu karsado noocaas oo kale. Aan fahamno faa'iidada nooca macmacaanka, xeerarka diyaarinta iyo isticmaalka.
Cunto yar oo la yaqaan
Miraha dhirta cestoobta waxay noqotay nooc ka mid ah kaararka booqashada ee Paris, sababta oo ah waxaad halkaas kula kulmi kartaa iibiyaasha waddooyinka, iyagoo qashinka lagu duubo. Nafaqada, oo lagu qaado hareeraha, qamriga iyo farjiyada. Kalluunkan, xusuusta caraf udgoon ee rootiga guriga lagu dubo, wuxuu abuuraa jawi gaar ah oo raaxo leh furan. Markaad dhadhamisay sida macmacaanka, way adagtahay inaad diiddo qayb kale.
Ma taqaanaa? Cuntadan yar-yar ee caanka ah waxay caan u ahayd inta aaney bilaabmin xilligeena. Tusaale ahaan, Rooma qadiimka ah, daaweyn noocan oo kale ah ayaa loo adeegay macmacaanka fasallada sare iyo dadka mudnaanta leh. Alexander The Great, inta lagu guda jiray ololeha dheer ee Bariga, ayaa loo isticmaalay sida jilicsanaanta iyo nafaqada ee bedelka caadiga ah, taas oo ay uga mahad celinayaan ciidankiisu awood u leeyihiin in ay u guuraan ilaa hadda.
Nutskan waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo macmacaan ladilan, maraqyo, fareemo, waxay ku jiraan bur iyo rooti, ​​macmacaan iyo nooc kasta oo macmacaan ah. Sidoo kale, khudradda qoryaha ee kednut waxaa loo adeegaa suxuunta hilibka, oo leh asparagus iyo maqaarka, oo lagu daro muuska oo leh muraayado iyo waxyaabo kale oo badan.
On fiidkii dayrta qaboobaha, dhirta ayaa u weheliya istiraatiijiyadii ugu wanaagsanayd ee khamriga loo dhuftay, iyo macmacaanka dusha sare ee quraacda lagu qurxiyo waxaa lagu daraa Norman Cider.
Caadada ah ee iibinta lowska qamriga ku jirta waddada kaliya ma aha mid gaar ah magaalooyinka Faransiiska, laakiin sidoo kale Talyaani ama Turki. Si kastaba ha ahaatee, kaliya ee Paris waxaa jira fasax gaar ah oo loogu talagalay tallow. Fasaxa waxaa la socda xafladaha, heesaha, tartamada iyo bandhigyada tiyaatarada hiwaayadda.
Waa maxay cayayaanka aad cuni kartid
Qofka oo laga yaabo inuu horay u fakaray xaqiiqda ah in dhirta dhirta ay ku koraan dayrka ama meel ku dhow, si aad u soo qaadato mirahooda hadda isla markaana bilaabaan cunto karinta. Laakiin ha ku degdegin gabagabada, sababtoo ah dhammaan xayawaanka ayaa ku habboon cunista. Tusaale ahaan, mid ka mid ah kuwa ku kora deyrkaaga ayaa iska leh nooca feerka fardaha, dadku ma cunaan.
Tani waa nooca cawska oo ah miro la siiyo fardaha iyo lo'da. Ninka, waxaa jira noocyo lagu beeray qoryaha dhirta. Noocyada loo yaqaan 'chestnut' ayaa loo ogolaaday cuntada waxaa ka mid ah:
Xilliga beerto Yurub;
Shiine (waa kuwa ugu khafiifsan);
Asia Minor (koritaanka Ermeniya, Azerbaijan iyo Krasnodar Krai).
Dhammaan noocyada kale ee lowska cawska ayaa ku haboon tan.
Chestnut ma aha oo kaliya geed, laakiin sidoo kale la cuni karo miraha faa'iido - nuts - tallow. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo kariyo lowska cows, sida loo abuuro iyo daryeelka ee jadwalka la cuni karo, sidoo kale akhri liistada dhammaan noocyada kelyaha.
Si aad u kala soocdo miraha la cuni karo iyo midda aan la dabooli karin ee geedka jilicsan, waxaa jira xeerar dhowr ah oo aasaasi ah. Si aad u kala soociso jimicsiga farabadan ee loo cuno bani-aadmiga, waxaad diiradda saari kartaa qodobbada soo socda:
Farqiga qaabka iyo baaxadda xaashida. Chestnut la cuni karo waxay leedahay qaab caleen badan oo wareegsan, iyada oo aan la jarjarey ama geesaha jugged.
Kala duwanaanta qaabka inflorescences. Xayawaanka la cuni karo, ubaxyada ayaa ku faafaya, halka noocyada fardaha ay yihiin kuwo aad u sarreeya, qaabeeya sida geed julle ah.
Dhadhanka miraha bisil. Qadhaadh cirridka ah ee dhadhanka dhadhanka ah, noocyada abuurka waxoogaa macaan.
Hoyga Horse wuxuu leeyahay hal miro oo keliya (kondhomka cagaaran ee cagaarshow), wax yar ayaa ka mid ah labo nuts.
Plyuska faras cagaaran oo dhalaalaya, waxaa ku jira burooyin yar yar. Kala duwan beerashada waxaa calaamad u ah joogitaanka thorns dheer iyo midab madow ah ee qoraalka.
Labadaba noocyada noocaan ah waxay ku midoobaan hal kaliya: midhahoodu waxay la mid yihiin midab madow iyo dusha sare leh lafo yar oo iftiin leh.
Qodob muhiim ah oo lagu fahmo qiimaha iyo faa'iidada miraha midka ah ee jirka bani'aadamka ayaa ah midabka nafaqeeyayaalka, macdanta iyo fiitamiinada.
Vitamiin iyo macdan
Waa in isla markiiba la ogaadaa in jiiradu ay yihiin noocyada hoose ee nuts, oo sidaas darteed ay ka kooban tahay waxay la mid tahay. Miraha Chestnut waa hodan ku ah istaarijka, dhirta dhirta, xeryaha macdanta kala duwan iyo asiidhyada amino. Waxay sidoo kale ku jiraan aaladda folic acid, taas oo ah mid aan muhiim u ah jirkeena. Sidoo kale halkan waxaa ku jira sukrose, glucose iyo fructose, fiitamiin A iyo E, iyo sidoo kale dhammaan lineka fitamiin B.
Waa muhiim! Kuwani waa nuugyada kaliya ee ku jira fiitamiin C.
Intaa waxaa dheer, lowska cows-ka waxaa ku jira waxyaalo yaryar iyo macro badan. Qoraal gaar ah waa joogitaanka:
Badeecadani waa mid aad u sareysa kalooriyeyaasha, maadaama ay jiraan 180 calories 100 grams oo ah nuts. Isla mar ahaantaana, in ka badan 60% badeecadda waa carbohydrates xoog leh oo qiimo leh, in ka badan 30% ayaa la siiyaa borotiinka iyo fiber, wax ka yar 10% ayaa weli ku jira dufanka. Nutskan waa kuwa ugu dufan, sidaas darteed khuduradda iyo dadka daaweeya miisaanka waxay badanaa ku daraan cuntada maalinlaha ah. Isla mar ahaantaana, midhaha dhirta cawska ayaa ah mid nafaqo leh oo nafaqo leh, waxay gaajoonayaan muddo gaaban oo aan la dhigin meelaha dhibaatooyinka ah. Haa, iyo dufanka iyaga ku jira oo kaliya ayaa cufan, waxayna si dhakhso ah u isticmaalayaan jirka.
Akhri waxyaabo faa'iido leh oo lowska ah sida: Manchu, walnut, cagaaran, Brazilian, geed, pecans, duufaan, khudradda iyo cashews.
Suurtogal maaha inaad cuno cayayaanka qoyan
Nutska loo yaqaan "Chestnut nuts" waa la cuni karaa cayriin, taas oo ah, kaliya geed. Laakiin marka hore waa lagama maarmaan in la diido filimka dhalada iyo midhaha. Nidaamkani waa waqti aad u badan, sidaas awgeed way fududahay in la diyaariyo. Waxaa jira cuntooyin badan oo ku saabsan mawduucan, waxaadna hubaal ka heli doontaa wax aad jeceshahay.
Intaa waxaa dheer, miraha khudrawaadka ah ma heystaan ​​in arin cajiib ah oo dhadhan, oo sidaas daraaddeed ma aad heli doonaa wax cajiib ah, xasuusta xasuusta ah ee saxan sida.
Sidee loo kariyaa daaweyn jilicsan
Shaqo yar oo jikada ah, waxaad heleysaa saxan leh dhadhan gaar ah oo aanad ka tagi doonin qof aan wax danbi ah lahayn, oo gurigaagu wuxuu ka buuxsami doonaa aromada quruxda badan ee romantic ee Paris. Hoos waxaa ku qoran liiska xulashooyinka asaasiga ah ee lagu sameeyo miro dhadhan.
Si saxan ayaad u baahan tahay:
kuruun alwaax ah;
spatula ama qaadada si ay u leexiyaan xayawaanka;
digsi qaboojiye leh dabool leh (ugu wanaagsan ee hore oo dhan, sida nuts brown ka baxaan maqaarka aan la isticmaalin oo inta badan gubi).
Waa muhiim! Mashiinka korontada ku shaqeeya maaha mid suurtagal ah in aad si fiican u dubato. Diyaargarow ugu wanaagsan waxaad u baahan tahay dab furan, ama ugu yaraan cunto kariye.
Saliidda, milixda iyo walxaha kale iyo qalabka kale looma baahna.
Cilladaha la cuni karo (sida ugu badan ee ku filan digsigaaga).
Si fiican u dhaq burka.
Miro kasta waa in la googooyaa, laakiin ma aha dhammaadka, laakiin qiyaastii dhexda. Sidaas darteed nutskaaga ayaa diyaar u ah dhaqso.
Hadda ku rid nuts digsiga, dhinaca hoose ee hoose.
Fry ilaa 5 daqiiqo dabka, dabool daboolka leh daboolka si aan midhaha u qalajin.
Diidi nuts. Waqtigaani way furan yihiin. Haddii qaybta uurjiifka ee ilmaha caloosha laga saaro, markaa waa lagama maarmaan in la yareeyo dabka. Marka xigta, xidh xididdada dabka qabow leh daboolka iyo cadaadiska 10 daqiiqo oo kale.
Markaa waa inaad mar kale ka hortagtaa midhaha oo dib u habeyn ku samaysaa dabka yar ee karinta gaaska, ama yaree dabka.
Xaaladdan, miro waa inay ku hayaan digsiga muddo shan iyo toban daqiiqo ah, kadibna waxaa la geyn karaa saxan.
Sug ilaa inta ay nuts qaboojiso, ka dibna sii wad si aad uga nadiifisid diirka dabka.
Waxaa ugu wanaagsan in la cuno tallowyada isla markiiba ka dib nadiifinta, iyagoo weli diiran. Marka ay si buuxda u qaboojiyaan, dhadhanka ayaa yareyn doona.
Dufanka la karkariyey
Farqiga udubdhexaadka ah ee diyaargarowgii hore ayaa ah in inta lagu jiro cunto karinta maqaarku aysan qarxin, sidaa daraadeed ma ahan lagama maarmaan in la sameeyo dhejinta ama jarista.
Lakabyo iyo biyo.
Buuxi geed geedka jilibka ah. Kuwa soo kacaya lama isticmaali karo. Waa in laga saaraa.
Ku dar mooska dheriga oo ku dabool biyo si markaas biyaha u daboolo si buuxda.
Karkarinta ka dib, kari ilaa labaatan daqiiqo, ka dibna ka daadi biyaha haray iyo shan daqiiqo kale oo digsi leh daboolka daboolka.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad ku darto nuts on saxan iyo, ka dib qaboojiyaha yar, iyaga diiri. Waa inaadan adkeynin nadiifinta, maaddaama ay adkaan doonto in la saaro markii la qaboojiyo.
Nuts-ka noocan oo kale ah ayaa lagu dari karaa maraqa iyo lakabyada, digaagga la kariyey, ama xitaa baradho la shiiday. Si arrintan loo sameeyo, ku dar caanaha iyo subagga in la siiyo qashinka, sida barafka la shiiday. Guud ahaan, jooniska wuxuu leeyahay wax badan oo la wadaago baradhada, oo ay ku jiraan dhadhanka.
Waxyaabaha la dubay
Habka saddexaad ee guud ee karsaaridda dhirta ayaa la dubay. Cuntadani waa mid ka mid ah ugu dhakhsaha badan.
Ma taqaanaa? Giriiga qadiimka ah, waddooyinka magaalooyin badan ayaa laga heli karaa geedo cagaaran oo dhan, taas oo ay uga mahadcelinayaan dadka ka cararaya gaajada inta lagu jiro dagaallo badan, oo ay weheliyaan qoryo. Geedka ugu horreeya ee Giriigga ah ee ku yaala magaalooyinka gumeysiga ee ku yaal xeebta Badda Badda waxay ahaayeen cayayaanka.
Lakabyada la cuni karo iyo xaabada.
First wash iyo qalaji midhaha geedka timirta on shukumaanka.
Ka samee jeexan iskutalaab ah oo ku yaalla dhinaca kore ee midhaha. Haddii taasi aysan dhicin, way qarxi karaan.
Ku dhaji nuts in la jarayo (dhinaca hoose ee hoose) waraaqda dubista, ka hor intaanad ku dhajin dhinaca hoose ee warqadda soo dejinta.
Dubo at 200 ° C 15-17 daqiiqo.
Ku rid nuts diyaar u ah saxan iyo diirka.
Miyuu suurtagal noqon karaa in looxyo
Aynu ogaanno waxa xaalada ay la socoto haweenka uurka leh, nuujinaya, caruurta iyo caruurta, maxaa yeelay, waxay sidoo kale, doonayaan inay ku raaxaystaan ​​dhammaan raaxada.
Uurka iyo nuujinta
Mirahaas waxaa lagula talinayaa inay isticmaalaan dadka qaba niyad-jabka, walaaca iyo culeyska, iyo sidoo kale dhar-barta jirka. Waxay ku jirtaa xaalad ah qufac dheeli tiran iyo fitamiino oo dhammaan hooyooyinka uurka leh iyo kuwa kalkaalinta naasaha laga helo, maadaama qayb ka mid ah ilaha jidhkooda lagu wareejiyo ilmaha.
Sidaa daraadeed, in la cuno xayawaanku ma aha mid suurtogal ah, laakiin waa lagama maarmaan u ah dhamaanba uurka iyo nuujinta - naasku waa hodan ku yaal xeryahooda badan, oo ay ku jiraan folic acid, oo saameeya kororka caanaha naaska.
Waxay sidoo kale leeyihiin waxyaabo kaloori hooseeya, taas oo muhiim ah, sababtoo ah haweenka uurka leh waxay badanaa qaataan miisaan dheeraad ah. Miraha geedaha xayawaanka ah ayaa si buuxda aan aheyn wax khasaare ah oo ka yimaada aragtidan.
Waa muhiim! Waxyaalaha potassium-ku wuxuu sameeyaa tallaabooyin habboon oo looga hortago dhiig-karka, waxay tirtiraysaa khatarta halista cudurada wadnaha, dhiig-yaraan (dhiig-yarida). Gaar ahaan, waxay ka caawiyaan hagaajinta wareegga dhiigga waxayna xakameynayaan cadaadiska dhiigga.
Xaqiiqo dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka wanaagsan ee kiriimyada:
Vitamin B2 wuxuu yareeyaa saameynta maqaarka gabowga; waxa kale oo uu leeyahay saameyn togan ku leh caafimaadka isha;
lafaha iyo ilkaha oo xoog loo yeeshay sababtoo ah fosfooriyada sare ee sare;
hurdo la'aan ayaa laga hortagayaa sababtoo ah joogitaanka amino acid sida tryptophan;
nuts waxay ilaaliyaan nidaamka dareenka sababtoo ah maadada sare ee fitamiin B iyo fosfooraska;
Waxyaabaha faleebada sare waxay ka caawisaa dheefshiidka;
Cagaarshow waxaa lagu talinayaa cudurka kelyaha, sababtoo ah content potassium;
ka caawi hagaajinta xasuusta;
wanaagsan ee dhiig-karka iyo cudurrada wadnaha.
Dhallaanka iyo carruurta
Ilmaha aan lagula talin in ay bilaabaan quudinta oo leh jadwalka, maxaa yeelay taasi waxay noqon doontaa mid aad u culus wax soo saarka caloosha daciifka ah. Waxaa haboon in la xusuusto in illaa lix bilood jirka jirka uu si buuxda u soo qaato dhammaan qaybaha muhiimka ah iyo fitamiinada caanaha hooyada. Sidaa daraadeed, waxaa suurtagal ah in lagu soo galo cunnooyinka cunnooyinka ee cunugga ee hal sano kaliya, iyo doorbididda sadex sano jir, marka calooshu horay u awoodo in ay u arkaan oo ay dheefshiido cuntada.
Waa muhiim! Gali cunnooyinka cunnooyinka ilmaha waa inay noqdaan kuwo tartiib tartiib ah, oo aan qiiro lahayn. Sidan oo kale, calooshu waxay awood u yeelan doontaa inay la qabsato isticmaalka iyo dheef-shiid kiimikaad culus.
Inta kale, ma jiraan xayiraad. Carruurta, iyo sidoo kale dadka waaweyn, naasku waxay noqon doonaan mid waxtar leh.
Yaa cuni kari karin tallaalada: waxyeelo iyo ka hortag
Inta badan, haddii aaney dhammaan, cuntooyinka ayaa leh labada dhinacba mid fiican. Nuts-ka cagaaran kuma jiraan wax laga reebo. Khilaafka ugu weyni waxaa ka mid noqon kara:
dulqaad shakhsi ah;
hoos u dhaca dhiiggaaga;
beerka iyo kalyaha;
u nuglaanshaha xasaasiyadda;
munaasabadda kudhaca jirka.
Haddii aadan dayacin talooyinkaan, markaa ma awoodi doontid inaad waxyeello gaarto adiga iyo jirkaaga. Waxa ugu muhiimsan - in la raaco cabbirka. Ku billow alaabtaan si tartiib tartiib ah, daawashada jidhkaaga. Haddii wax xasaasiyado xasaasiyadeed aan loo arag, waxaad si ammaan ah u kordhin kartaa raashinka.
Kuwa aan ku raaxaysan karin aromadan jacaylka ah ee waddooyinka Paris waxay u diyaari karaan geeskooda gaarka ah ee Faransiiska markay joogaan guryahooda, iyagoo jikadooda ku buuxinaya nuucyada gaarka ah ee lowska la dubay. Dareemadani ma dhaafayso qof aan indho la'aan aheyn, marka laga reebo, waxay leedahay hanti aad u qiimo badan oo faa'iido leh oo kaa caawin kara ilaalinta fitamiinada iyo miisaanka macdanta jirka. Waxaa jira macmacaan mid ka mid ah miro ka samaysan qoryaha dhirta oo kaliya ma aha mid fiican, laakiin sidoo kale faa'iido leh.